HomePage – Classic Layout – Complete Nepali News Portal
admin June 24, 2017	मनोरंजन
26 एकै चोटी हुने भो निरमाया तिम्रो जन्ती मेरो मलामी…. यहाँहरुकै मायाँले Live आईरन मन लाउछ झर्को नमान्नु है.. आज नाँच्ने गीत पनी गाउछु अन्तिम सम्म सुनेर साथ दिनु होला.. सल्ला सुझाव सहित मन परेमा सियर पनि गर्दिनु होला है.. जे भाछु यहाँहरुकै साथ सपोर्ट,सल्ला सुझाव र मायाँले भएको छु.. आफैले …
50 इश्वर कंडेल भन्नु हुन्छ : हामिले एक सकारात्मक शोच ले जिवनमा यस्तो काम गर्नु कि आगामी मोड हरुमा सहज र सजिलो भई जिवन रंगिन बनोस मानिसलाई जिवनमा सबै चिजको आवस्यकता परि रहन्छ त्यस मध्यको एक हो रोमान्टीक हामीले समय सान्दर्विक मिलाएर रोमान्सको साथ साथै केही सन्देश दिन खोजी रहेका छौं …
admin June 24, 2017	मुख्य खबर
176 झापा, १० असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहजिल्लामा निकै प्रिय छन् । खासगरि, नेकपा एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले लिएको अडान, जिल्लाबासीलाई दिएको महत्वले हरेक झापालीले ओलीप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने गरेका छन् । विरोधीहरु समेत ओली भनेपछि हच्किन्छन्, आजकल । गृहजिल्ला बसाइका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले …
admin June 24, 2017	विचारदृष्टिकोण
86 मानीस सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न हामि किन जन्मन्छौ अनि किन मर्छौ ? जन्मेको किन होला ? आफै जानी जानी जन्मेको त पक्कै होईन होला ? जन्मको प्रयोजन के होला ? यत्रो दुख दिनुथियो भने किन जन्मेको ? के अर्थ छ यो सुख दुख भोग्नमा ? कस्ले गराएको होला यस्तो ? …
Sisir Budhathoki June 24, 2017	विशेष
547 दमक झापा । दार्जिलिङका सुवास घिसिङले ८० को दशक प्रारम्भमा गोर्खाल्यान्ड अन्दोलन सुरु गरे। तर २२ अगस्ट १९८८ मा भएको भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र सुवास घिसिङका बीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता र २३ अगस्ट १९८८ को भारतको केन्द्र सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रपछि आन्दोलन स्थगित भयो। यो स्थगनलार्इ …
178 सावित्री सुवेदी (सगरमाथाकी छोरी) बालिकाको हत्यामा चुइक्क बोल्न नसक्ने कायर संस्थाहरु र राजनीतिक संरक्षण तुरुन्त बन्द गरियोस । आमालाई जब सम्म हामीले बुझ्न सक्दैनौ तबसम्म नारी अस्तित्वको पक्षमा हामी लड्न सक्दैनौ । नारीअधिकार, बालअधिकार प्राप्त र लागु गर्न कठीन र मुस्किल छ । दिनहुँ बालिकाहरु बलात्कार हुँदै मारिएका छन ,अनि …
admin June 23, 2017	मुख्य खबर
611 ‘क्यान्सर भएको बायाँ स्तनबाट पीप बगिरहन्छ । घाउ दुखेर निकै गाह्रो भएको छ । तीन महिनायता जँचाउन अस्पताल गएको छैन । ४ वर्षकी छोरीलाई लिएर डेरामा बस्छु । श्रीमानबाट केही सहयोग पाएकी छैन । छोरीकै लागि भएपनि बाँच्न चाहन्छुु तर मसँग उपचार खर्च छैन ।’ – दुर्गामाया ठकुरी, क्यान्सर पीडित …
admin June 23, 2017	Politics, विचारदृष्टिकोण
3,393 (राजनिती एज ले होईन एजेन्डा ले गर्ने हो) वामी को मेरो सम्बोधन मा गर्नु भएको कमेन्ट प्रती सबै मा हार्दिक धन्यबाद ! * ५६ बर्ष को पुष्पकमल दाहाल लाई ८६ बर्ष को गिरिजा प्रसाद ले नेतृत्व दिएर शान्ती प्रकृया मा ल्याए ! * हिलारी भन्दा उमेर ले पाको ट्रम को …
admin June 23, 2017	साहित्य
98 कोमल गज़ल:- संसारमा दुक्ख विशाल रैछ हाँसो खुसीको अनिकाल रैछ पाइन्न चाँडै हल वेदनाको लाखौंथरी क्लिष्ट सवाल रैछ छन् घात रोजै प्रतिघात रोजै साँच्चै यहाँ ज्यान हलाल रैछ खोलो हुँदै बग्दछ आँसु धारा सङ्कष्टको रास निहाल रैछ बाढी छ चारैतिर दुर्दशाको गन्तव्य रोक्ने परखाल रैछ आनन्दमा पुग्न सकिन्न कैले बाधा …
admin June 23, 2017	मनोरंजन
190 “यस्तो माया गर मलाई दुनियाँलाई डाहा होस, मैले जस्तै माया पाउने हरेकलाई चाह होस।” यो आग्रह हो लव अफेयरको मामिलामा प्राय मौन रहने चर्चित नायिका नायिका नम्रता श्रेष्ठको पवन शर्मासंग। जो संग उनी पहिलो पटक स्क्रिन शेयर गर्दैछिन यो रोमान्टिक गीतमा। आफै फिल्म निर्माणमा जुटेपछी पछिल्लो समय नम्रता म्युजिक भिडियोहरुमा …
Page 1 of 14612345»102030...Last »	RecentPopularCommentsTags	तिमि जादा पराइ को डोलीमा…. हाम फालेर मर्छु म खोलिमा………मार्मिक गित भिडियो